Rafitra fandatsahan-drà ho an'ny fitrandrahana fasika sy voajanahary - Ellicott Dredges
Rehefa ilaina ny fitrandrahana lalina dia fasika sy gravel, mineraly, firavaka ary fitaovana hafa indostrialy, ny fitrandrahana miaraka amin'ny dredge no fomba mahomby indrindra hahazoana fametrahana tahiry.
Ny rafi-pandrafetana sy ny famolavolana Ellicott dia mifantoka amin'ny famokarana mahomby sy ny fampihenana ny vidiny mandritra ny tsingerin'ny fiainana amin'ny fitrandrahana manontolo. Ny mpiasan'ny fitrandrahana dia miara-miasa akaiky amin'ny ekipan'ny dredge mpahay siansa alohan'ny fividianana dredge amin'ny alàlan'ny fametrahana ny rafitra dredge.
Ny fanesorana ny fasika sy ny gravel dia iray amin'ireo fampiasana malaza indrindra amin'ny dredge. Ny fasika sy ny gravel no nalaina an-dranomasina ary avy amin'ny toeram-pitrandrahana tany no mamatsy ny indostrian'ny fananganana erantany Na aiza na aiza toerana misy ny tetik'asa, Ellicott® dia manolotra fitaovana fampiasa an-drongony isan-karazany mba hisafidianana ny fampidirana an-dàlam-doha cutterhead portable, fantsom-baravarana an-tsokosoko, na fanodinana lalina amin'ny fananganana sy ny fanodinana totohondry.
Ny dredges marika Ellicott® dia namboarina farany ho an'ny famolavolana enta-mavesatra izay afaka mitazona ny toe-javatra faran'izay henjana indrindra raha toa ka mora foana ny fitaterana. Na manao ahoana na lehibe na kely ny tetik'asan'ny fasika sy vatokely, Ellicott Dredges dia afaka mamolavola sy manangana fananganana ara-potoana amin'ny fotoana sy ao anaty teti-bola mifanaraka amin'ny zavatra takiana manokana.
Ny fampiasana dredges dia fomba ilaina hanesorana fasika, gravel, Frac Sand, Iron Ore na Coal Tineings, ary mineraly hafa. Na manao ahoana na manao ahoana fatratra ny tetik'ady momba ny harena ankibon'ny tany Ellicott® dia misy fanodinana natao manokana hamenoana ireo fepetra takiana. Ny fitrandrahana miaraka amin'ny dredge no fomba mahomby indrindra ahazoana fitaovana tsy miovaova, na fasika izany, fasika na volafotsy masira.
Ny fanarenana na fanesorana ny fitrandrahako amin'ny alàlan'ny fanamorana dia fandidiana lehibe mihazona ny vanja sasany miasa tsara. Ny fangatahana fanaingoana fanao amin'ny marika Ellicott® dia anisany, eo amin'ny sehatry ny arintany, ny vy, ny volamena, ary ny sehatry ny fako. Ny fampiasam-dresaka hahazoana fihoaram-pefy dia saika manana fiverenam-bidy tsara hatrany.
Ellicott® dia manana tantara momba ny fanamboarana dredge maro an'isa izay azo ampiasaina hanarahana ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana. Nandritra ny taona maro dia nanolotra dredges ho an'ny mpanjifa any Canada, Repoblika Dominikanina, Filipina ary firenena hafa erak'izao tontolo izao i Ellicott®.
Series 370HP Dragon® Dredge
Series 870JD Dragon® Dredge
Dredge momba ny fitrandrahana herinaratra manokana - "Cooljarloo I"
Famerenam-bokatra momba ny fitrandrahana fitrandrahana miaraka amin'ny Ellicott 370 Dragon® Dredge
Dredge fitrandrahana herinaratra manokana - "Hydro-Quebec"